​कतै पनि नछापिएका कुरा « Jana Aastha News Online
​कतै पनि नछापिएका कुरा
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:०२
‘यसले त्यसलाई, त्यसले उसलाई हरायो, बिगा¥यो, सिध्यायो भनेको छ । यो पार्टी हो कि तमासेहरुको जमघट ?’
एकथरि तालि पिट्ने, अर्काथरि मुख लुकाउने– यो नेपाली कांग्रेस बैठकको दृश्य हो । दुर्गतीको दोष सबै शीर्षस्थ नेताले बोक्नुपर्ने भन्दै गुरुराज घिमिरे कड्किएपछि बैठक गर्माएको थियो । त्यसपछि मात्र प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्धका विषय प्रस्तुत गरे । गुरुले चाहिँ औँलो तेस्र्याएरै भने, ‘तपाईं पनि कम दोषी होइन । वरिष्ठ नेता भएर रोइलो मच्चाउन पाइन्छ ?’ उनले इंगित गरेका थिए, रामचन्द्र पौडेललाई । भने, ‘टिकट बाँडुञ्जेल तपाईं र सभापति सँगसँगै हुनुहुन्छ । तपाईंले भाग खोज्नुभएको छ । सभापतिले भाग पनि दिनुभएको छ । अहिले उठाएको कुरा त्यसबेला किन उठाउनुभएन ? अहिले रोएर हुन्छ ?’
गुरुको कुरा सुनेर मुसुमुसु हाँसिरहेका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि यही मेसोमा दनक पाए । ‘वीपीको छोरालाई कसैले केही नभन्ने, मुसुक्क हाँस्ने, चिया खुवाउने ! अर्थोक त चल्छ, तर पार्टी यसरी चल्दैन !’
अहिलेको कांग्रेस बैठकमा अर्को अचम्म छ– जहिल्यै बीचमा बसेर बोल्ने कृष्ण सिटौला सभापतिविरुद्ध आगो भएर निस्किए । भने, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकको टिकटबारेमा तपाईंले को–कोसँग छलफल, सल्लाह गर्नुभयो ? भन्न सक्नुहुन्छ ? गर्नेबेला आफूखुशी गर्नुभएको छ । अहिले सबैलाई सोधेर, सल्लाह गरेर भन्न लाज लाग्दैन ?’ उनले ०७० को चुनावको कुरा निकाले, ‘सुशील कोइरालालाई उम्मेदवार नबनाआँै भन्दा यहाँहरु नै लागेर होइन, दुई–दुई ठाउँबाट बूढालाई कष्ट दिने ? भरतपुरमा प्रचण्डकी छोरीलाई नछोडौँ भन्दा मान्नुभएन । उग्रपन्थीसँग गठबन्धन नगराँै भन्दा पनि सुन्नुभएन । अन्तको कुरा त मान्नु भएन–भएन, मेरै क्षेत्रमा, मलाई सिध्याउन के–के गर्न, गराउन लाग्नुभयो, सम्झिनु भा’छ ?’
त्यसपछि बलबहादुर केसीको पालो आयो । ‘एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना’ भन्दै शुरु गरेका उनले भने, ‘आरजु भाउजूका कुरा धेरै आए । पैसा नदिई कसैको हातमा टिकट परेको सुनिएन । यस्तो चुनाव जितेको भए अचम्म हुन्थ्यो, हार्नु कुनै अचम्म भएन ।’
नवीन्द्रराज जोशीले तत्कालै कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । चर्किने पालो आयो कल्याण गुरुङको । ‘क्रियाशील सदस्यताको अवधी नपुगिकन केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ । त्यस्ता केन्द्रीय सदस्यले के काम गर्छन् ? पार्टीको काम गर्छन् कि अरुको दलाली गर्छन् ? जसले पार्टी बुझेको छैन, त्यस्तालाई नेता बनाएपछि के हविगत हुन्छ, देखिहाल्यौँ । अब ती सबैको सदस्यता खारेज गरियोस् ।’
देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरु ‘मिलेमतोमा सबै कुरा गर्ने, अहिले सभापति मात्रै देखाएर पन्छिने ?’ भन्दै बैठकमा चर्किरहेका छन् । यही कुराचाहिँ देउवाविरोधी खेमाका गुरु घिमिरेले पनि उठाए । भने, ‘सभापतिलाई मात्रै कारक मान्न त सबै अधिकार उहाँलाई दिएको हुनुपथ्र्यो । तर, भागिदारी सबैले लिनुभएको छ । पराजयको दोषचाहिँ निश्चित व्यक्तिमाथि मात्रै थोपर्ने काम नगरौँ ।’ यसो भन्दाभन्दै उनले थपे, ‘कांग्रेसको सभापतिले केटाकेटीले जत्तिको पनि बुद्धि नपु¥याई बोलेका कुराहरुको पनि हिसाब राख्नुपर्छ ।’
लिजाको निम्ति दिनदिनै लफडा
सरकार, भीड जम्मा गर्ने के नै थियो र दरकार ?
चिह्न एउटै लिएर लड्ने ? नो चान्स
छर्रा अनेक छुटिरहने
तथ्यांकमा चाहिँ देशको भयंकर तरक्की